Wafdi ka socda IGAD oo Muqdisho lagula shiray | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiiru-dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir ayaa Maanta la kulmay guddiga xaqiiqo raadinta ee ka socda Urur Goboleedka IGAD, kaas oo dalka u yimid xal u helidda xaaladda ka taagan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
Xubnaha Gudiga oo ka kooban Safiirada Jabuuti ee Soomaaliya iyo Kenya Aadan Xasan Aadan iyo Yasiin Cilmi Buux iyo afar Sarkaal oo katirsan Ciidamada Jabuuti, ayaa dhawaan booqday Xuduuda labada dal, iyagoo usoo kuurgalay eedeynta DF ee ku aadan in Kenya ay Mandheera ku hubeynayso Malleeshiyaad Soomaali ah oo loo diyaariyay inay weeraraan Beled-Xaawo.
IGAD ayaa sameeyay gudiga kadib shirkii 20-kii December ay madaxda Ururka ku yeesheen Jabuuti, kaasoo Farmaajo uu u gudbiyay gudoomiyaha Cabdalla Hamdow dacwad ka dhan ah Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa uga dacwootay IGAD in Kenya ay fara-gelin qaawan ku hayso arrimaha gudaha dalka, waxaana wadahadalladii Jabuuti ka dhacay December la isla gartay in kiiska labada dal si hoose loo xalliyo.
Weli wax warbixina lagama soo saarin kulanka oo ka qabsoomay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Laakiin waxaa la filayaa in gudiga marka uu ku laabto Jabuuti inuu soo saaro war-saxaafadeed ku saabsan waxyaabaha kasoo baxay baaritaankiisa.